Akụkọ - Otu esi ahọpụta ihe eji eme ihe maka akpa nri
Kedu otu esi ahọrọ ihe akụrụngwa akụrụngwa nri?
Etu ị ga-esi ahọrọ ngwungwu akụrụngwa nri
Na mkpokọta, ụkpụrụ ndị na-esonụ metụtara nhọta nke ihe ngwugwu ihe oriri.
1.Ikpụrụ nke akwụkwọ ozi
N'ihi na nri nwere akara ule dị elu, ọkara na obere dabere na usoro na ọnọdụ eji eme ihe, a ga-ahọrọ akararịrị dị iche iche nke ihe ma ọ bụ atụmatụ dị ka akara nri dị iche.
2.kpụrụ nke ngwa
N'ihi iche na njirimara nke nri, ha chọrọ ọrụ nchekwa dị iche iche. A ghaghị ịhọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa iji kwekọọ na njirimara dị iche iche nke nri dị iche iche na ọnọdụ mgbasa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ihe nkwakọ ngwaahịa maka nri afụ ọnụ na-achọ ịrụ ọrụ ikuku dị elu, ebe nkwakọ ngwaahịa maka akwa kwesịrị ịbụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ maka ibuga. Ekwesịrị iji ihe ọkụkụ na-eguzogide ọgwụ dị elu mee ka ihe ọkụkụ dị elu dị elu, ma mee ka nri dị jụụ dị ala nke ihe nkwakọ ngwaahịa na-eguzogide ọgwụ dị ala. usoro mbufe na njikọta (tinyere ikesa) na nhọrọ nke ihe nkwakọ ngwaahịa. Njirimara nke ihe oriri chọrọ mmiri, nrụgide, ọkụ, isi, ebu, wdg Ọnọdụ ihu igwe na gburugburu ebe obibi gụnyere ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, ọdịiche okpomọkụ, oke iru mmiri, nrụgide ikuku, ikuku gas na ikuku, wdg. Ihe ndị metụtara cyclic gụnyere njem njem, ọnọdụ nke njem (ndị mmadụ, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ụgbọ elu, wdg) na ọnọdụ okporo ụzọ. Na mgbakwunye, ọ dị mkpa ịtụle ihe dị iche iche chọrọ nke mba dị iche iche, mba na mpaghara maka nkwakọ ngwaahịa iji kwado nnabata nke ahịa na ndị ahịa.
3.Ikpụrụ nke Economy
Ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịkwara ịtụle akụ na ụba ha. Mgbe iburu n'uche njirimara, ogo na ọkwa nke nri a ga-akwakọba, imewe, mmepụta na ihe mgbasa ozi ga-atụle iji nweta ọnụahịa dị ala. Ọnụahịa nke ihe nkwakọ ngwaahịa abụghị naanị metụtara ọnụahịa ahịa ya, kamakwa metụtara ọnụahịa nhazi na mgbasa mgbasa. Ya mere, a ga-atụle ihe dị iche iche ka ịhọrọ ihe kacha adabara na nhọrọ nke nhazi nkwakọ ngwaahịa.
4.kpụrụ nke nhazi
Ihe nkwakọ ngwaahịa nwere ọrụ na nkọwa dị iche iche n'ọnọdụ dịgasị iche iche nke otu nri. Dịka ọnọdụ ya si dị, a ga-ekewa ngwugwu ngwaahịa n'ime nkwakọ ngwaahịa dị n'ime, nkwakọ ngwaahịa etiti na ngwugwu mpụga. Nkwakọ ngwaahịa dị na mpụga na-anọchite anya onyonyo nke ngwaahịa a ga-ere na mkpokọta mkpokọta na shelf. Ihe dị n'ime ya bụ ngwugwu nke na-abịa na nri kpọmkwem. Nkwakọ ngwaahịa dị n'etiti nkwakọ ngwaahịa dị n'ime na ngwugwu dị n'èzí bụ nkwakọ ngwaahịa etiti. Ihe nkwakọ ngwaahịa dị n'ime ya na-eji ihe ngwugwu na-agbanwe agbanwe, dị ka ihe dị nro rọba, akwụkwọ, aluminium na ihe nkwakọ ngwaahịa A na-eji ihe eji eme ihe na ihe eji echekwa maka nkwakọ ngwaahịa； A na-ahọrọ nkwakọ ngwaahịa dị iche iche dị ka ihe oriri, ọkachasị kaadiboodu ma ọ bụ katọn. Ọ chọrọ nyocha zuru ezu iji nweta ihe achọrọ iji rụọ ọrụ yana ụgwọ akụ na ụba iji dakọtara na ịhazi ọrụ nke ihe nkwakọ ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa.
5.Ikpụrụ nke Esthetic
Mgbe ị na-ahọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa, anyị kwesịrị ịtụle ma nkwakọ ngwaahịa e ji ihe a rụọ nwere ike ịre nke ọma. Nke a bụ ụkpụrụ mara mma, n'ezie nchikota nke nka na nkwakọ ngwaahịa. Agba, udidi, nghọta, nkwesi olu ike, ịdị nro na elu mma nke ihe nkwakọ ngwaahịa bụ ọdịnaya nka nke ihe nkwakọ ngwaahịa. Ihe nkwakọ ngwaahịa na-egosipụta ike nka bụ akwụkwọ, plastik, iko, ọla na seramiiki, wdg.
6.kpụrụ nke sayensị
Ọ dị mkpa iwepụta ihe dịka ahịa, ọrụ na ihe oriri iji họrọ ihe nkwakọ ngwaahịa na sayensị. Nhọrọ nke ihe nkwakọ ngwaahịa nri kwesịrị ịdabere na nhazi chọrọ na ọnọdụ akụrụngwa nhazi, wee bido na sayensị na omume. Ekwesịrị ịtụle ọtụtụ ihe, gụnyere njirimara nke akparamaagwa ndị ahịa na ahịa ahịa, mkpa nchekwa gburugburu ebe obibi, ọrụ ọnụ na afọ ojuju, teknụzụ ọhụrụ na ike ahịa ahịa, wdg.
7.Pkpụrụ nke mwekota na usoro nkwakọ ngwaahịa na ụzọ
Maka nri a nyere, a ga-eji usoro nkwakọ ngwaahịa kachasị dabara adaba mgbe ịhọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị na igbe. Nhọrọ nke teknụzụ nkwakọ ngwaahịa nwere njikọ chiri anya na ihe nkwakọ ngwaahịa na ọnọdụ ahịa nke nri juru. Otu nri ahụ nwere ike iji teknụzụ nkwakọ ngwaahịa dị iche iche nweta ọrụ ọrụ na nsonaazụ yiri ya, mana ọnụahịa nkwakọ ngwaahịa ga-adị iche. Ya mere, oge ụfọdụ, ọ dị mkpa ijikọta ihe nkwakọ ngwaahịa na teknụzụ nkwakọ ngwaahịa iji nweta ihe nkwakọ ngwaahịa na nsonaazụ imewe.
Tụkwasị na nke ahụ, a pụrụ imebe na nhọrọ nke ihe nkwakọ ngwaahịa ihe na-ezo aka na nri nri dị adị ma ọ bụ nke ejirilarị otu ụdị ma ọ bụ nri ndị yiri ya.